မီနီ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲ အတွက် ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက စပွန်ဆာပေးထားခြင်း အပေါ် ပြည်သူဝေဖန်မှုကြေ? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉
မန္တလေး မြို့တော် မီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက် ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက စပွန်ဆာ ပေးထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍လူမှုကွန် ရက်စာမျက်နှာ (ဖေ့စ်ဘွတ်)တွင် မြို့ခံပြည်သူလူထုက ဝေဖန်လျက်ရှိ သောကြောင့် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ကြော်ငြာဆိုင်း ဘုတ်တချို့ ဖြုတ်ယူသိမ်းဆည်းမှု များရှိနေကြောင်း သိရသည်။
”စီးပွားရေးသမားဆိုတာ ပစ္စည်းလည်းကြော်ငြာသလို စပွန်ဆာလည်းပေးတယ်။ မြို့တော်မီနီ မာရသွန်ကအမြဲတမ်းရှိတယ်။ လွတ်လပ်ရးနေ့အတွက်ပွဲပါ။ ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီဆိုတော့ ပြောစရာတစ်ချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ မာလ်တီအကုန် ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးလား။ ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါ လေးလည်း ထည့်ပြောပါဦး။ ပြန် ဖြုတ်နေတယ်ဆိုတာက ဒီကိစ္စကိုလည်း သန့်သန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်၊ ဒီပွဲကစပွန်ဆာမရှိဘဲ ဒီပွဲကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ပြည်သူတွေ ဝေဖန်တာကို အလေးထားပြီးဖြုတ် တာလည်းရှိချင်ရှိမှာ ပေါ့နော်”ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ဒီဇင် ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ပြောသည်။ မန္တလေးမြို့တော် မီနီမာရသွန် ပြိုင်ပွဲကို ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီအပြင် အားဖြည့်အချိုရည်၊ ကော်ဖီမစ် စသည့် ကုမ္ပဏီများက စပွန်ဆာပေးထားပြီး အဆိုပါဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီ သည် မန္တလေးမြို့တော်မီနီမာရသွန် ပြိုင်ပွဲအပြင် ဒီဇင်ဘာလူထုလမ်း လျှောက်ပွဲအတွက်လည်း စပွန်ဆာ ပေးထားမှုများ ရှိသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ဦးဆောင်ကျင်းပသော မန္တလေးမြို့တော်မီနီမာရသွန်ပွဲတွင် ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီထံမှ စပွန်ဆာလက်ခံခဲ့ခြင်းမှာ အင်မတန်မှားယွင်းသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့ခံပြည်သူများက ထောက် ပြဝေဖန်လျက်ရှိသည်။ မန္တလေးမြို့တော်မီနီမာရသွန် ပြိုင်ပွဲလမ်းတစ်လျှောက်တွင် စပွန်ဆာပေးထားသော ကုမ္ပဏီများက ကြော်ငြာဗီနိုင်းများ ကပ်ထားပြီး မြို့ခံပြည်သူများက ထောက်ပြဝေဖန်မှုကြောင့် ဖော်ပြမှုကြောင့် ကျုံးပတ်လည်လမ်းများနှင့် ကျုံးဘေးသံတိုင် အကာအရံများတွင် ကြော်ငြာထား သော ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီ၏ကြော်ငြာများကို ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက်ပိုင်းမှ စ၍နေရာအချို့တွင် စတင်ဖြုတ်သိမ်းမှုများရှိကြောင်းသိရသည်။
တောင်ဇလပ် ပန်းပင်များကို စိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်းမှု နည်းပါးပြီး ခုတ်ယူမှု များပြားနေသည့် အတွက်
အခြေခံပညာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ရေကိုစနစ်တကျ အသုံးပြုတတ်စေရန် အသိပညာပေးမည့် စီမံချက်က
အငှားယာဉ်များနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်များ အလုံးစုံ မော်တော်ယာဉ် အာမခံ ထ??
အရေပြားတင်းရင်းဆေး မထိုးချင်ကြောင်း ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းပြော
ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များ ရှိတိုင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ပေးရန် တပ်မတော် စီမံထားဟုဆို
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် တစ်ရက်နေ့၌ သထုံမြို့နယ် ပေါ်တော်မူဘုရားပွဲတော် ဒေသခံပြည်သူမျာြး?
မန္တလေးမြို့ရှိ တစ်ရှူးစက်ရုံ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလုပ်သမား ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာမှု မရှိဟုဆိုက??
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ဖိအားပေးမှု ဟောင်ကောင် လူထု ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ
မန်းပဲမျိုးစုံဈေးကွက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဆက်တိုက်ဝယ်ယူမှုကြောင့် ပဲစင်းငုံဈေးနှုန်း ကျ?
အမေရိကန်သည် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကို လုံခြုံမှု မရှိအောင် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု အီရန် စွပ်စွဲ